18 qof oo lagu dhex diley masaajid ku yaalla Nayjeeriya - Radio Risaala: Somali News Online
Xildhibaano ka mid ah Golaha Shacabka ayaa maanta lagu doortay Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baydhabo. Hal xildhibaan ayaa lagu doortay Dhuusamareeb halka Saddex xildhibaan lagu doortay...
Doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ka bilaabatay Baydhabo
Home Wararka 18 qof oo lagu dhex diley masaajid ku yaalla Nayjeeriya
Ugu yaraan 18 qof, ayaa lagu dhex diley weerar lagu qaadey masaajid ku yaalla gobolka Nayjer, ee dhaca galbeedka dalka Nayjeeriya.
Sida ay sheegayaan warar laga soo xigtey dadka deegaanka, rag hubeysan ayaa gudaha u galey masjidka, iyagoo laayey dadkii ku tukanayey salaaddii subax.
Qof ku nool tuulada uu weerarku ka dhacey ee Maza-Kuka, ayaa u sheegay wargeyska The Punch, inaaney sheegi karin tiro sax ah, oo la xiriirta dhibaatadii dhacdey, laakiin waxaa laga soo bixiyey masjidka meydad gaaraya illaa iyo 18 qof.
Dableydii hubeysneyd ee weerarey tuulada Maza-Kuka, ayaa la sheegay iney wateen Dhug Dhugleey ama Mootooyin.
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo goordhow ka hadlaya dagaalka Guriceel
Next articleAhlusunna oo AMISOM ku eedeeysay ka qeyb qaadashada dagaalka Guriceel